HomeDUNIDAAasiya98 IranGawaarida Guryaha iyo Maraakiibta ayaa lagu daray Wadooyinka Tareenka ee Iran
14 / 01 / 2020 98 Iran, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline
Gawaarida dagaalka ee gudaha iyo gantaalada lagu daro wadooyinka tareenka ee Iran
213 gaari oo kuwa dagaalka ah oo laga soo saaray dalka Iran ayaa la galiyay xaflad. Saied Rasouli, madaxweynaha jamhuuriyada jamhuuriyada islaamiga ee tareenka RAI (RAI), ayaa sheegay in tirada gawaarida gudaha iyo gantaalada ay kordheen 58%, sida ku xusan heshiis lala galay misaaniyada sanadkii hore. Ururka qorshaynta (BPO) wuxuu ku dari doonaa 2021 gawaariir dheeri ah maraakiibta tareenka dalka dhamaadka dhamaadka sanadka kale ee sanadlaha ah ee Iran (March 974).
Sida uu sheegay sarkaalka, wadar dhan 476 gawaarida gawaarida dagaalka ah iyo gawaadhi qiimahiisu yahay $ 1791 milyan ayaa la qorsheeyay in lagu daro maraakiibta tareenka. Bartamihii bishii Maarso, 37 baabuur oo rakaab ah, 30 gawaariir ah iyo 217 gawaarida xamuulka ah ayaa lagu dari doonaa
Wuxuu intaas ku daray in celceliska da'da dalka ee rakaabka iyo maraakiibta xamuulka ay hada 24 jirsadaan, iyo in tirada maraakiibta cusub ee ku biireysa doonyaha cusub si weyn hoos loogu dhigi doono.
Intaa waxaa dheer, qiyaastii 1000 milyan oo doolar ayaa loo qoondeyn doonaa dib-u-cusboonaysiinta 476.2 rakaab ah iyo gaari xamuul ah iyo gaadiidyo xamuul.
Sida uu sheegay Saciid Mohammadzadeh, oo ah madaxii hore ee RAI, horumarinta wadooyinka tareenada ee Iran waxay u baahan tahay in kabadan 32.000 oo gaari iyo tareeno afarta sano ee soo socota horumarinta kaabayaasha tareenka ee dalka.
TULOMSAS Aqoon isweydaarsi dib u eegis warshad Gawaarida 2 shirqool hoosaadyo…
Safar dheeraad ah oo loogu talagalay YHT ee Bayram, Wagons dheeraad ah oo lagu daray Tareenada Gobol
TCDD 5 wagon-lokomotiga farsamada ayaa isku diyaarinaya hindisada ganacsiga ijaarka
Alstom iyo Faransiiska ayaa la saxiixday Heshiiska Iran Railways
Tareenada Talyaaniga iyo Iran Railways waxay saxiixeen heshiis cusub
Soo-saarista 30 gaari oo sariirood oo u dhexeeya Waddooyinka Tareenka Bulgarian iyo TÜVASAŞ…
ARDEP wuxuu ku daray isku xirka tareenka ee bakhaarada Mersin
Mid cusub ayaa lagu daray shilalka tareenka ee Karaman, 3 dhaawacmay
Xidhiidh cusub oo cusub oo ku socda xarumaha tareenka xawaaraha sare ee Spain (Video)
Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran Tareenka
Diyaaradda tareenka ee Iran